Ngabe i-OnePlus Band incintisana neXiaomi Mi Band 5? | TeraNews.net
Ngabe i-OnePlus Band incintisana neXiaomi Mi Band 5?
umbhali Nikitin Eugenius Kushicilelwe ku 04.01.2021
Njengoba ungenalwazi kunoma iyiphi indawo, kungenzeka ukwethula imikhiqizo emakethe ngokwezimo ezimbili. Dala okuthile okusha nokuhlukile. Noma, thatha umbono womncintiswano, uwuguqule bese uwethula ngaphansi kwelogo yakho. INhlangano BBK, isimemezele ukukhishwa kwe-OnePlus Band, yanquma inketho yesithathu. Thatha iXiaomi Mi Band 5 njengesisekelo bese uyenza ipholile. Ukwahlulela ngokubukeka kwakhe, umenzi wakhe wanqikaza isikhathi eside futhi akazange enze ikhophi yewashi elidumile leXiaomi.
U-Insider Ishan Agarwal ubhale kuTwitter ukuthi umkhiqizo omusha ungumncintiswano oqonde ngqo kwiXiaomi Mi Band 5 ngokusebenza nentengo. Isikrini se-AMOLED 1.1 amayintshi, ukuvikelwa kwe-IP68, ukuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo. Kukhona ngisho nokuzimisela kokugcwaliswa kwe-oxygen oxygen. Intengo ye-OnePlus Band ingu- $ 35.
Akukho phawu lokuncintisana neXiaomi Mi Band 5 lapha. Uma kuphela ngoba ukusebenza kwe-OnePlus Band kuthakazelisa kakhulu. Ukuze uthole injabulo ephelele, imodyuli ye-NFC kuphela engekho. Futhi kuyihlazo ukuthi umenzi akazange akubone kusengaphambili lokhu. Ngemuva kwakho konke, umhlaba wonke kade ushintshele kulobu buchwepheshe obungenantambo. Vumela i-OnePlus Band ibize u- $ 5 ngaphezulu. Kepha bekuthakazelisa kakhulu kubathengi. Masethembe ukuthi ngokungafani XiaomiI-OnePlus ngeke ibambeke kumklamo owodwa, kepha izokhipha imikhiqizo ethakazelisa ngokwengeziwe.